9v Ac Adapter - muumbi, fekitari, mutengesi kubva kuChina
19V Dc Simba Adapter tsananguro: 90watt yakakwira Simba Rakawandisa 19 Volt Adapter inoshandiswa zvakanyanya kumagetsi eLEB, LCD skrini, Information Technology Equipments uye zvichingodaro. Ac Adapter 19V : AC yekuisa 100-240Vac Zvinobuda: 19VDC 4.7A 100% yakakwira voltage bvunzo, 100% kuchembera bvunzo, 100% yakazara...
29v 2a ac dc adapta
29V Dc Simba Adapter tsananguro: 90watt yakakwira Simba Rakawandisa 19 Volt Adapter inoshandiswa zvakanyanya kumagetsi eLEB, LCD skrini, Information Technology Equipments uye zvichingodaro. Ac Adapter 29V : AC yekuisa 100-240Vac Zvinobuda: 29VDC 2A 100% yakakwira voltage bvunzo, 100% kuchembera bvunzo, 100% yakazara...
19V Dc Simba Adapter tsananguro: 65watt yakakwira Simba Rakapidigura 19 Volt Adapter inoshandiswa zvakanyanya kumagetsi eLEB, LCD skrini, Information Technology Equipments uye zvichingodaro. Ac Adapter 19V : AC yekuisa 100-240Vac Zvinobuda: 19VDC 3.33A 100% yakakwira voltage bvunzo, 100% kuchembera bvunzo, 100%...
Zvinorevei uye kuburitsa zvinorevei pane AC adapta? Power adaperi inoshandura magetsi kubva kune imwe magetsi kuenda kune imwe voltage, 12V4A Desktop yeKuchinja magetsi magetsi anoshandiswa zvakasiyana. Iyo inobuda voltage yeiyi adaptiti akasiyana-siyana nemutoro; zvemidziyo inoda yakasimba more voltage, mutsara...
9v Ac Adapter 6v Ac Adapter Ac Ac Adapter 5v Ac Adapter 8A Usb Ac Adapter 9 Volt Ac Adapter 9v 3000ma Ac Adapter Kutsiva Ac Adapter